आँबुखैरेनीमा निःशुल्क शिविर - पोखरा समाचार
पोखरा । आँबुखैरेनी समाज सेवा संस्था र छिम्केश्वरी जनरल हस्पिटल, आँबुखैरेनीको संयुक्त आयोजनामा शनिबार आँबुखैरेनीमा भएको शिविरमा ३ सय ५ जनाको निःशुल्क रक्त परीक्षण गरिएको छ । शिविरमा सहभागीको मधुमेह तथा रगतमा हुने खराब बोसो निःशुल्क परीक्षण गरिएको हो ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरबहादुर थापाले नयाँ प्रविधि, सुविधा र स्वास्थ्य सेवा अब गाउँ गाउँसम्म पु¥याउनु जरुरी भएको बताए । उनले सरकारले यस प्रकारको नीति निर्माण गरी गाउँमै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । थापाले भने, ‘सरकारले गर्नुपर्ने काम यहाँहरुले गर्नुभएको छ । यस प्रकारको दायित्व बोध र सहकार्यले नै हामी समृद्धितर्फ लाग्न सक्छौं ।’
शिविरमा प्राविधिक सहयोग पोखरा लेखनाथको सभागृहचोकमा रहेको युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालि (युआरएल) ले गरेको थियो । संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तले आवश्यक स्वास्थ्य उपचार पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गरे । जनअधिकारको सम्मान गर्दै र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आफूहरुले प्रदेश नं. ४ का विभिन्न स्थानमा विभिन्न संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा शिविरहरु गर्दै आएको स्मरण गरे । उनले भने, ‘यस क्षेत्रको अग्रणी र लोकप्रिय ल्याब भएकाले हामी सोही प्रकारको दायित्व निर्वाह र जनअपेक्षाप्रति जिम्मेवार र सचेत छौं ।’
कार्यक्रममा सहभागीलाई डा. अमृत केसीले स्वास्थ्यबारे सचेतना प्रदान गरे । उनले मधुमेह लाग्नुका कारण, यसका उपचार विधि, जोगिने तरिका आदिबारे प्रकाश पारे । डा. केसीले मधुमेह अहिलेका धेरै रोगको मूल भएकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्नसके अन्य रोग लाग्ने सम्भावनासमेत कम हुने उल्लेख गरे । आँबुखैरेनी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख ऋषि केसीले यस प्रकारका कार्यक्रमले सर्वसाधारण जागरुक र सचेत बनी स्वस्थ्य जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने बताए ।
आँबुखैरेनी सेवा समाजका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत छिम्केश्वरी जनरल अस्पतालका निर्देशक राजन ढकाल र सञ्चालन समाजका सचिव राजेश सुनामले गरेका थिए ।